Fampahalalana momba ny faritra Ota Ward | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Pejy fandraisana Ota Ward
Ity no tranonkala ofisialin'ny Ota Ward.Mampahafantatra ny vaovao farany momba ny fitantanana paroasy, fampahalalana momba ny toerana, fomba fanao amin'ny kaontera, fampahalalana momba ny hetsika sns.
Toerana fampiroboroboana Ota Ward City Mampiavaka Ota
Ny "Unta Ota" dia midika hoe "tsy manam-paharoa amin'ny Ota Ward".Izahay dia manaparitaka zava-mahasarika isan-karazany ao amin'ny paroasy toy ny toerana voatokana sy fivarotana.
O-chan Net dia tranonkala iray ahafahanao mahazo vaovao mombamomba ireo fikambanana miasa ho an'ny fiarahamonina, toy ny fikambanan'ny mponina, ny fikambanan'ny mpiara-monina ary ny orinasa NPO!
Tranonkala ofisialin'ny Fikambanana Fizahan-tany Daejeon
Feno fampahalalana momba ny fandaharam-pianarana fizahan-tany notsongaina, hetsika, toerana fizahan-tany, hotely, fivarotana sns ao amin'ny Ota Ward.Azonao atao koa ny mijery sarintany sy boky torolàlana.
Ny International City Ota Association (GOCA) dia manome fampianarana sy hetsika isan-karazany mifandraika amin'ny fiaraha-miaina amin'ny kolontsaina sy ny fifanakalozana iraisampirenena, ary koa ny fakan-kevitra sy fanampiana ho an'ny vahiny.
Mampahafantatra fampahalalana momba ny hetsika sy fivarotana ao Ota Ward, toerana misy an'i Denenchofu, izay misy ifandraisany amin'ny Andriamatoa Eiichi Shibusawa, sy ny seranam-piaramanidina Haneda, vavahady mankany Japon.